Qulqulatooyin Qowmiyadeed laga soo sheegi magaalada Diri-dhaba. – Xeernews24
Qulqulatooyin Qowmiyadeed laga soo sheegi magaalada Diri-dhaba.
22. Januar 2019 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Magaalada Diri-dhaba ayaa xaalad degdeg ah gashay ka dib markii qulqulatooyin qowmi ahi mar kale ka qarxay magaalada . Waxaa la soo wariyey in iska horimaadku aad u ba’ani ka jiro maagaalada xaalad degdeg ah an ay ku jirto.
Qoowmiyadda Axmaaradda oo maal maah ahanba ku jirtay xos diimeedyo iyo dhoolatus siyaasadeed daandaansi u muuqday ayaa la sheegayaa inay dagaal ku qaadday Soomaalida halkaasna waxaa ka billowday isku dhac.
Waxay wararku intaas ku darayaan in oromaddina la soo safatay u soo hiilisay axmaarada, dagaal laba geesood ah na soomaalida lagu soo qaaday.
Ka dibna ciidamadda amaanka ayaa arinta soo fara gashay waxayna siddi caadada u ahayd rasaas ku fureen Soomaalidi.
Dire dawa police and armabatana shooting somali people only hhhh we never forget that action
Slået op af Kacanka Barbarta Diridhabe i Tirsdag den 22. januar 2019
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/dire-dawa.jpg 160 315 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-22 16:47:212019-01-22 16:47:21Qulqulatooyin Qowmiyadeed laga soo sheegi magaalada Diri-dhaba.
Khilaaf soo gala dhex galay Madaxda dowlad degaanka Soomaali State iyo mas’uuliyiin... Ma Runba in Cabdixakiin Cumar cigaal oo xilkii laga qaaday?